XOG WARAN:- Lix arrin oo Farmaajo uga iman kara hesiiska Berbera oo uu taageero | Wararka Jubbaland
XOG WARAN:- Lix arrin oo Farmaajo uga iman kara hesiiska Berbera oo uu taageero
Lix arrin oo Farmaajo uga iman kara hesiiska Berbera oo uu taageero Waxaa isa soo taraaya wararka ku saabsan in Dowlada Somalia ay dib uga laabatay go’aanka is hortaaga Heshiiska maamulka Somaliland ay ku bixisay dhulka baaxada weyn ee la filaayo in dhawaan Dowlada Imaaraadka ka dhisato Saldhig Millitery oo laga duqeyn doono Xuutiyiinta dalka Yemen.
1­Kalsooni darro ka dhex curata Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo iyo Shacabka Soomaaliyeed.
2­Rajo beel ku dhaca Shacabka Soomaaliyeed oo horay ballanqaad difaaca dalka ah ka helay Madaxweyne Farmaajo oo hadda u muuqda mid ka laabtay go’aankii uu ku diidanaa Heshiiska Berbera.
3­Muuqashada rajooyinka ku aadan in DFS ay halkeeda kasii wadi doonto waxyaabihii lagu dhaliili jiray dowladihii ka horeeyay tan Farmaajo.
4­Kalsooni darro ka dhex curata Madaxweynaha Somalia iyo Xildhibaanada isbedel doonka ah, maadaama markii hore ay ku midoobeen in la badbaadiyo dalka iyo Kheyraadkiisa.
5­In go’aanka dib uga laabashada is hortaaga Heshiiska lagu bixiyay Saldhiga Berbera ay dhiiro galiso Maamulada kale ee dalka oo iyaguna heshiis la gali doona dowladaha Shisheeye ee ka faa’iideysanaaya Kheyraadka uu alle ugu maneystay Somalia.
6­In Shacabka Soomaaliyeed ay dayacaan ballanqaadkii ay u sameeyen Farmaajo ee ahaa inay kala shaqeyn doonaan Amniga iyo Horumarka, kadib markii uu ka weecday qodobkii lagu taageeray ee ahaa is hortaaga Heshiiska lala baalmaray Baarlamaanka Somalia.